What do CE1 and Collège references in French?
Ny tontolo mitongilana amin'ny anarana Frantsay amin'ny faha-dimanjato, ny taona ambony ary ny maro hafa
Avy amin'ny fianarana ambaratonga ambony ka hatramin'ny fianarana ambony, ny anaran'ny haavon'ny lisea sy ny ambaratonga faharoa (sekoly ambaratonga voalohany, ambaratonga ambony, sekoly ambaratonga faharoa) dia samy hafa amin'ny Frantsay amin'ny teny Anglisy. Ireo teny ampiasaina mba hamaritana ireo singa amin'ny traikefa momba ny fanabeazana dia mety samy hafa koa ho an'ireo izay efa nianatra tany amin'ny sekoly amerikana na UK. Ohatra, ny teny hoe "sekoly" amin'ny ankapobeny dia école , fa midika koa hoe "sekoly ambaratonga fototra", ary ny teny hoe "mpianatra" amin'ny sekoly ambaratonga voalohany dia écolier .
Ao amin'ny mari-pahaizana sy kolotsaina taty aoriana, mpianatra iray tsy mianatra .
Ireto ny anaran'ny sekoly frantsay, araka ny isa sy ny taona, miaraka amin'ny fepetra mifanaraka amin'izany any Etazonia sy Angletera. Ho an'ny mazava, nomenay ny taona ho toy ny fanondroana.
L'Ecole Maternelle (Sekolin-jadona / Sekoly Alahady)
Age Grade fanafohezana US UK
3 -> 4 Petite section Sal nursery nursery
4 -> 5 Moyenne section MS Pre-K fandraisana
5 -> 6 Grande section FAA akanin-jaza Taona 1
Mariho fa tsy any an-tsekoly any Frantsa ity sekoly ambaratonga ity, na dia misy sekoly maro manolotra izany safidy izany, ary ny ankamaroan'ny ankizy dia manatrika zazakely na farafaharatsiny. Ireo telo taona ireo dia ny governemanta no manohana ary, noho izany, afaka (na mendrika). Misy ihany koa ny fikarakarana mialoha sy ny fianarana any an-tsekoly.
L 'Ecole Primaire (sekoly ambaratonga voalohany / sekoly ambaratonga fototra)
6 -> 7 Cours préparatoire CP / 11ème 1st Grade Taona 2
7 -> 8 Cours élémentaire première année CE1 / 10ème 2nd Grade Taona 3
8 -> 9 Cours élémentaire deuxième année CE2 / 9ème 3rd Grade Taona 4
9 -> 10 Cours moyen première année CM1 / 8ème Faha efatra Taona 5
10 -> 11 Cours moyen deuxième année CM2 / 7ème 5th Grade Taona 6
Ao Frantsa, ny sekoly dia tsy maintsy manomboka amin'ny kilasy voalohany amin'ny sekoly ambaratonga fototra, na "le cours préparatoire", "onzième" (faha-11).
Mariho fa io no fahasamihafana lehibe indrindra amin'ny anaran'ny sekoly Frantsay sy Anglisy amin'ny teny anglisy: Ny taona fianarana amin'ny fianarana Frantsay dia miala sasatra (11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ary taona farany antsoina hoe terminalale ).
Ny taona amerikana sy Angletera dia an-taonany maro no miakatra ambaratonga (2, 3, 4, sy ny sisa).
After the école primaire, ny frantsay frantsay dia manomboka ny fiantsoana, "fianarana ambaratonga faharoa", na ny sekoly faharoa .
Le Collège (sekoly ambaratonga faharoa)
11 -> 12 sixième 6e na 6ème 6th Grade Taona 7
12 -> 13 cinquième 5e na 5ème 7 taona Taona 8
13 -> 14 quatrième 4e na 4ème 8 ora Taona 9
14 -> 15 troisième 3e na 3ème 9 taona Taona 10
Tandremo ny "college" diso. Amin'ny teny frantsay, le collège dia sekoly ambaratonga faharoa, fa tsy oniversite. Ny antsointsika hoe "college" na "oniversite" amin'ny teny anglisy dia l'université na la faculté amin'ny teny frantsay.
Ny fanabeazana sasany dia tsy maintsy atao mandra-pahatapitry ny zandriny ambony, na dia azo atao aza ny vahaolana marobe raha te hiditra amin'ny fianarana ny mpianatra. Miova matetika ireo fitsipika mifehy io dingana io, ka ny tsara indrindra dia ny mitady mpitsabo mahay any am-pianarana mba hahazoana fanazavana fanampiny.
Le collège dia mifarana amin'ny fanadinana antsoina hoe le brevet des collèges (BEPC) .
Le Lycée (sekoly ambaratonga faharoa)
15 -> 16 seconde 2de Faha-10 taonany Taona 11
16 -> 17 première 1ère Faha-11 Taona 12
17 -> 18 Terminale Term na Tle Faha-12 taonany Taona 13
Amin'ny faran'ny le lycée, misy fitsapana antsoina hoe le baccalauréat (na le bac , miaraka amin'ny farany " c " milaza ny hoe "k").
Ny laharana telo amin'ny bac dia: le bac L (littéraire), le bac ES (économique et social ) ary le bac S (siansa). Misy koa le bac professionnel, izay misy faritra manokana na faritra 40 eo ho eo.
Mandalo ny bac ny mpianatra Frantsay hanohy ny fianarany amin'ny fianarana ambony ( des études supérieures) ao amin'ny anjerimanontolo ( l'université ) na ny fakulté ( la faculté). Ireo Grandes Ecoles malaza dia mitovy amin'ny Ligin'ny Ivy. Rehefa miteny ianao, dia hilaza ianao hoe, ohatra, mpianatra lalàna ( étudiant en droit) na mpianatra ao amin'ny fitsaboana ( étudiant en médecine ). Ny "mpianatra bakalorea" dia tsy manana lisansa avant la. Ny "mpianatra mpianatra any ivelany" dia tsy mianatra taorian'ny fahazoan-dàlana.
Nahoana ny Italianina no malaza indrindra?
Ny Angano 'Rude French'
Top Movies amin'ny teny italiana
Ahoana ny fomba fampiasana ny lahatsoratra amin'ny teny frantsay
Fanatanjahantena - Vokatry ny Japoney
Petit Papa Noël - Ilay hira malaza indrindra amin'ny teny frantsay
Falalalala - Carol Christmas Carol
Tari-dàlana Fanampiana Hanampy ny Mpianatra Mpianatra Anglisy "Ahoana ny Fomba?"
C'est le Temps de Magasiner! Kanada ≠ Frantsay Frantsay + Anglisy
Ny fototry ny Ady Meksikana-Amerikana
'Ilay fitrangan-javatra mahaliana momba ny alika amin'ny fotoan'ny alina' ho an'ny bokin'ny bokiny
Aiza no hividianana kodiarana sy kodiarana?
Ny paikady fisorohana ny alikaola ho an'ny mpianatra mpianatra
3 Fanamboarana manampy amin'ny fanatsarana ny fitomboana sy ny rhythm ao amin'ny gymoelina
Ireo tononkira folo malaza momba ny fialana amin'ny vehivavy ratsy
Ny Hira Fihetseham-panoherana tsara indrindra
Wish Well Ny kamiaona tsara indrindra tonga amin'ny fifanaraham-panambadiana tsy ho ela!
Ahoana ny famakiana sy famakiana ireo fomba amam-panaovana famokarana
Iza no tsara kokoa noho ny fanaovana dinidinika - Notebooks na Recorders?
Ny anaran'ny anarana SHAW sy ny tantaram-pianakaviana
20 Teny nalaina izay mampianatra ireo fikambanana Ny fomba hanomezana fanajana sy fanajana
Mamolavola ny hoavy Espaniôla
Ny Fanambarana Fampiharana 2018-19 dia mitaky
Nikola Tesla - Mpihira lehibe
Ampio ny Astronomers Classify Galaxies
Fanampiana amin'ny devoly: Mametraha fanontaniana ary mamaly Online
Famaritana sy Ohatra avy amin'ny Topoi ao Rhetoric
Ny bokin'i Kells: Sora-tanana manjelanjelatra manjelanjelatra
Mijery ny fitarihana ara-tsosialy any Etazonia
Trano Centipedes, Scutigera coleoptrata
Ny fiantraikan'ny Lohataona Arabo any Afovoany Atsinanana
Top Skateboarding ao atsinanan'i Etazonia